३ महिनामा ४ पटक विवादित दुर्गेश, अन्तरबार्तामा गीत गाउन नजान्दा ट्रोल र आलोचित - www.dthreeonline.com
३ महिनामा ४ पटक विवादित दुर्गेश, अन्तरबार्तामा गीत गाउन नजान्दा ट्रोल र आलोचित
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ११, २०७७ समय: ८:०४:१३
ईटहरी/ सायदै प्राय गीतमा विवादित हुने नेपाली गायक को हुन् ? भन्दा दुर्गेश थापाको नाम आउँछ । नेपाली संगीत उधोगमा थापा परिचीत नाम नै हो । तर पछिल्लो समय उनको परिचयले आम दर्शकलाई हसाई रहेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाको कारण लकडाउन भएको समयदेखी अहिलेको अवस्थासम्म आउदा उनी ४ चोटि विवादित भए । लकडाउन बिचमा उनले सार्बजनिक गरेको “द मास्कर” गीतका कारण पनि उनी विवादमा फसे ।
गीतमा प्रयोग गरिएको अ श्ली ल शब्द तथा सोनिका रोकायालाई बेड सिनमा देखाईएको कारण विवाद भयो । यस्तै गत वर्ष हिट भएको ‘बिछ बिचमा’ बोलको तीज गीतको दोश्रो भाग सार्बजनिक गर्दापनी उनी विवादबाट अछुतो रहन सकेनन् । गीतको शब्द चोरेको आरोप खेप्नु पर्यो । यता फेरि उनले सोहि गीतको तेस्रो भाग समेत सार्बजनिक गरे । जुन गीत पनि विवादको झमेलामा फस्यो ।
तर चोरिको आरोप भन्दा दुर्गेश थापाको महिला अवतारले सामाजिक संजाल मज्जैले तात्यो । उनी ट्रोल संगै हासोको पात्र बने । उनी सो गीतको भिडियोमा सारी चोलिमा ढलक्क भएर गीत गाउदै गरेको देख्न सकिन्छ । विवादै विवादको झमेलामा डुबिरहेका थापा फेरि चर्चित पत्रकारको जालोमा फसे । बोल्नमा खासै सिपालु नदेखिने उनी खरो पत्रकार ऋषि धमलाको अन्तरबार्तामा आएपछि नमज्जाले चेपिए ।
धमलाले उनको प्रेमको बारेमा कुरा गरे । प्रेमिकाको नाम फुत्काउन धेरै प्रयास गरे तर थापा सो कुरामा त अडिग बसे । तर, अन्य गायकको गीत गाउदा भने उनलाई सामाजिक संजालमा मज्जैले उडाइयो । नउडाउन पनि कसरि ? अन्य गायकको उनले गाएको गीत सुर न तालको नै सुनिन्छ ।
उनले स्वर सम्राट नारायण गोपाल देखीको गीत गाउन थाले शिव परियार लगायत सबै गायकहरु मन पर्ने भन्दै उनले परियारकै “पिउदिन भन्दा भन्दै” गीत गाए तर शब्द चिप्ल्याए । उनकैको अर्को गीत “सबैले मलाई” पनि गाए । तर, सुर चिप्लिदा सो गीत गाउदै गरेको क्लिप फेसबुक तथा टिकटकमा यतिबेला भाईरल छ । धमलाले यम बरालको पनि गीत मन पर्छ ? भन्ने प्रश्न गरे । थापाले दाईको गीत मनपर्छ भन्दै रामकृष्ण ढकालको ‘ओराली लागेको हरिणको चाल’ गीतलाई यम बरालको बनाईदिए । अन्तरबार्ता सार्बजनिक पछि उनी अहिले आलोचित बनिरहेका छन् ।